Wararka Maanta Archives - Page 4 of 538 - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Page 4
February 9, 2020 Duceysane175Leave a Comment on Jubaland oo beesha caalamka uga digtay taageerada rabitaan shaqsi ah
February 9, 2020 Duceysane190Leave a Comment on Alshabaab oo war kasoo saaray ciidamo itoobiyaan ah oo ay dileen
February 8, 2020 Duceysane134Leave a Comment on Madaxwayne Farmaajo oo saxiixay sharciga batroolka dalka
Muqdisho, Febaraayo 08, 2020; Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay Sharciga Batroolka dalka, kaddib markii Labada Aqal ee Baarlamaanka Jamhuuriyaddu ay soo dhammeystireen hannaankii sharci ee kaga aaddanaa dhaqan galkiisa. Madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda uu shacabka iyo Dowladnimada Soomaaliyeed u leeyahay sharcigan oo hagaya xuquuqda muwaadiniinteennu ay u leeyihiin in looga […]
February 8, 2020 Duceysane256Leave a Comment on Aqalka sare oo meel marinaya sharciga doorashooyinka
Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inuu meel mariyo sharciga Doorashooyinka Qaranka oo maalmihii la soo dhaafay Aqalka ka doodayay, horayna Guddi ugu saaray si ugu soo baaraan-dagaan sharcigan. Doodda uu maalmihii la soo dhaafay Aqalka Sare ka lahaa sharcigan ayaa ahaa mid lagu kala aragti duwanaa oo […]
February 8, 2020 Duceysane196Leave a Comment on C/rishiid janan oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wada gobolka Gedo
Wararka ka imaanaya degmada Beledxaawo ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya in Ciidamo fara badan oo ka tirsan daraawiishta Jubbaland ay dhaq dhaqaaqyo ciidan ka wadaan duleedka degmadaas. Ciidamadan oo ku hubeysan gaadiidka dagaalka ayaa la sheegay in ujeedkooda yahay sidii weerar ugu qaadi lahaayeen degmooyinka Beledxaawo iyo Doolow oo maalmo ka hor ay la wareegeen […]
February 8, 2020 Duceysane183Leave a Comment on Soomaaliya iyo Rwanda oo kala saxiixday heshiis ku saabsan socdaalka hawada
Dowladaha Soomaaliya iyo Rwanda ayaa kala saxiixday heshiis la isugu furayo hawada labada dal si loo sahlo ganacsiga labada dal Soomaaliya ayaa waxaa heshiiska u saxiixay Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdulaahi Salad halka dowlada Rwanda uu u saxiixay Wasiirka Kaabayaasha Claver Gatete. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdulaahi Salad ayaa aad u […]
February 7, 2020 Duceysane195Leave a Comment on Dowlada federaalka oo ka hadashay ciidamada ay geysay gobolka gedo
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sharaxaad ka bixiyay ciidamada milatariga ee lagu daabulayo deegaano ka tirsan gobolka Gedo. Maxamed Cabdi Xayir Wasiirka Warfaafinta ayaa ku macneeyay sababaha loo geeyay ciidamada gobolka Gedo ay tahay sidii ay ugaga qeyb qaadan lahaayeen difaaca dalka. “Dastuurka ayaa qeexaya in dowlada federalka ay ciidamo […]
February 7, 2020 Duceysane248Leave a Comment on Ku xigeenkii gobolka gedo iyo gudoomiyihii degmada baardheere oo xamar lagu xiray
Dowladda Soomaaliya ayaa Muqdisho ku xirtay Guddoomiye kuxigeenkii Gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Isxaaq (Al-Qaadi) iyo Gudoomiyihii degmada Baardheere Ismaaciil Qorax, kaddib markii shalay waan waan muddo socotay lagu keenay magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in Guddoomiye kuxigeenka Gobolka Gedo iyo Guddoomiyaha degmada Baardheere shalay diyaarad looga soo qaaday Baardheere, markii wada hadalo muddo […]
February 6, 2020 Duceysane168Leave a Comment on Wariye Soomane oo damiin lagu sii daayey
Wararka ka imanaya magaalada Garowe ayaa sheegaya in damiin lagu sii daayay weriye Cumar Maxamed Soomane oo ciidamada Booliska xireen shalay. Dadaalo ay sameeyeen ururka saxafiyiinta Puntland ayaa suurtogeliyay in damiin muddo 7 maalmood ah lagu sii daayo weriye Soomane. Wariye Soomane ayaa loo haystaa warar uu ka sii daayay idaacada Kulmiye oo uu wakiil […]
February 6, 2020 Duceysane166Leave a Comment on Donald trumb oo ka bad baaday duufaantii xilka qaadista ahayd